Our company အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုဖြစ်ပါသည်, ပေးသွင်း အဆောက်အဦးအပြင်ထည်, နှင့်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ကျနော်တို့ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေက Taiwanကျယ်ပြန်အကွာအဝေးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာကြောင်း -based ကုမ္ပဏီတစ်ခု။ ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းမီထုတ်ကုန်များအပေါ်-အချိန်ပေးအပ်ခြင်း၏သငျသညျအာမခံထားသောကအလွန်ပါရမီရှင်မှုပညာရှငျနှငျ့အခွက်တဆယ်ရေကူးကန်ရှိသည်။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်များဆိုမော်ဒယ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, အခမဲ့ခံစားကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံနှိပ်ခြင်း & အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ 1. polyester (pongee) အထည်အလိပ် 75D ~ 600D (FDY, DTY)
အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ 2. က Non-ယက်အထည်အလိပ် & ချုပ်-နှောင်ကြိုးကိုက Non-ယက်အထည်အလိပ်
4. အားလုံးသည်အထည်အလိပ်, အနာ-resistant ခရမ်းလွန်-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်စေနိုင်ပါတယ်။
5. အရောငျ: ဖောက်သည်နမူနာသို့မဟုတ် Pantone အရောင်အားလုံးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ဖြစ်ကြ၏။
6. ကျနော်တို့ supply သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ process ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြ၏။ စိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှုများကိုကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
1. နိုင်လွန်, polyester အထည်အလိပ်။
70D ကနေ 1800D2ကျယ်ပြန့် Denier ။
3. အထူးအအမည်: ခရမ်းလွန်-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မီးပျက်, ရရှိနိုင်တဲ့အနာ-resistant, ပုံနှိပ်။
4.Color: Pantone နှင့်အခြားအရောင်များကိုလည်းကြိုဆိုပါလိမ့်မည်။
1. 20D ~ 50D Microfiber အထည်အလိပ် & အထည်အလိပ် Check
2. နိုင်လွန် Taffeta အထည်အလိပ် 70D, 210D
3. အထူးအအမည်: C6 W / R ကို, RF ဂဟေဆော်, Breathable, က Ultra-အလငျးကိုအင်္ကျီ, waterproof 10,000mmH2O ... စသည်တို့
4. အရောငျ: မဆို color ကိုရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
1. Taslon အထည်အလိပ်
2. အထူးအအမည်: ရေကို Rrepellent, RF ဂဟေဆော်, က Ultra-အလငျးကိုအင်္ကျီ, Breathable,
ရေစိုခံ ... စသည်တို့
3. အရောငျ: Black, ရေတပ်အပြာ & ဘရောင်းကမကြာခဏဖြစ်ကြောင်းအရောင်ကိုစေ့စေ့မေးမြန်းပြီး။ အရောင်များကိုစိတ်ကြိုက်သို့မဟုတ် Pantone နောက်သို့လိုက်နိုင်ပါသည်။
4. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့စုံစမ်းမှုကြိုဆိုပါတယ်။ စိတ်ကြိုက် spec အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
1. polyester အထည်အလိပ် 50D ~ 75D
ပုံနှိပ် & ဖောင်းကြွနှင့်အတူ 2. Pongee
3. အထူးအအမည်: Breathable, DWR, RF ဂဟေဆော်, က Ultra-အလငျးကိုအင်္ကျီ, waterproof 10,000mmH2O ... စသည်တို့
5. ကျွန်တော် supply သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ process ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြ၏။ စိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှုများကိုကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
POCOTEX ထံမှပြန်လည်အသုံးပြုအထည်နိုင်လွန်သို့မဟုတ် polyester ထားနိုင်ပါတယ်,အရာအောက်ကပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်အားသာချက်များရှိပါတယ်.
အစိမ်းရောင်ထည်မြင့်မားတဲ့ခရမ်းလွန်စွမ်းဆောင်မှုများ၏အယူအဆလည်းပါဝင်သည်,Blend ယက်လုပ်ခြင်း(PP,နိုင်လွန်,PE)နှင့် dope ဆိုးကြိုး,ချည်ငင်အတွက်ပေါ်လီမာအရည်ပျော်ဖို့ masterbatch အရောင်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသော.အဘယ်သူမျှမပိုဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ပါသည်.ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်ရေသယံဇာတကယ်တင်.
အထည်အလိပ်စွန့်ပစ်ခြင်းလေးနက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်သက်သေပြလျက်ရှိသည်.အစိမ်းရောင်ထည်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့တုန့်ပြန်၌အကြှနျုပျတို့၏ဟူသောဂတိတော်သည်.Dope ဆိုးသောအထင်ရှားဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်.ထိုကွောငျ့,ယက်ထည်ထည်သေ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်,85 ချွေတာ%ရေ,65%အင်အား,60%ဓာတုပစ္စည်းများ,60%CO2 ထုတ်လွှတ်မှု.ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်,dope ဆိုးမျှင်အရောင်ပိုကောင်းယူနီဖောင်းများ,အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အလင်းအရောင် Fast,နှင့်ပိုမိုအားကောင်းခရမ်းလွန်ခုခံ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Dope ဆိုး polyester ကြိုး 150D အတွက်ရရှိနိုင်,300D,450D,600D နဲ့ 1200D သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက်နှင့် function ကိုမှတက်ကြိုဆိုဖြစ်ပါသည်.